Inoshanda Lanyard Factory - China Inoshanda Lanyard Vagadziri uye Vatengesi
Lanyards haingoshandisirwe chete zviitiko kuumba logo yakagadziriswa, asi zvakare kuita zvakanyanya kushanda nerubatsiro rwezvakasiyana zvishongedzo & zvigadzirwa. Semuenzaniso, iyo pfupi tambo ine carabiner inoshandiswa kune yekunze zviitiko. Tambo yefoni inoita kuti kusimudza kwako kuve nyore nekukudzivirira kubva parunhare kuenda chero kwawakakanganwa. Chinobata chinogona kusunungura maoko ako kana iwe uchizunza maoko panguva yechiitiko. Mitambo yemagetsi magirazi emagetsi anoita girazi reziso munzvimbo chero kwaunoenda. Kamera lanyards yaizobata ako aunoda makamera. Rega kungoita maradhibhodhi e LED, zvinoita kuti marara ave akanaka uye anotaridzika panguva yehusiku. Uyezve, inogona kushandiswa muyunifomu aiguillettes uye bhandi remhemberero. Iyo lanyard yaizowedzera kushanda kana zvimwe zvinoshanda zvishandiso zvikabuda. Wakave unofarira chero basa here? Kana iwe une chero zano reakasarudzika mashandiro eranyards? Kutumira logo kwatiri uye isu tinopa iwo ehunyanzvi mazano sekuenderana neyako yakagadziriswa inoda. Kunyangwe kubva pakupa mitengo yakanakisa, mhando yedu inodzivirirwa zvakare. Seyakagadzira makore makumi matatu nenomwe, tsoka yedu yega yega chiratidzo uye kukura kwakabatana zvakanyanya nevatengi vedu.
Lanyards ine bhodhoro rinovhura
Uniform Aiguillettes uye Mhemberero Sash